Zimbabwe: Mugabe Rejects Heroes Acre Burial - allAfrica.com
By Owen Gagare and Bridget Mananavire
Family sources said Mugabe has specifically made it clear that he would not want President Emmerson Mnangagwa -- who seized power from him in a military coup in November 2017 -- and his allies to hold forth and pontificate over his dead body.
Mugabe -- who has remained bitter with Mnangagwa for toppling him despite their decades of close relations spoiled by the dismissal of the latter from government just before the coup -- says he wants to be buried next to his mother Bona at his rural home in Zvimba, Mashonaland West province, sources say.
News of Mugabe's rejection of his former Zanu PF comrades and the party as well as government in the twilight zone of his life and also in death as he has already indicated, jolted Mnangagwa into action, sources said.
Officials say Mnangagwa reacted by sending to Singapore -- where Mugabe has been receiving treatment for years -- a delegation headed by Chief Secretary to the President and Cabinet Misheck Sibanda. The team also included Central Intelligence Organisation Director-General Isaac Moyo and Mugabe's former personal doctor Professor Jonathan Matenga.
Mnangagwa and state media hacks - who had stopped referring to Mugabe as "comrade" after the coup -- resumed doing so this week, showing the overtures for rapprochement.
Government and Zanu PF officials say Mugabe's refusal to be buried at Heroes Acre -- if his wish is to be respected -- would constitute the greatest repudiation of not just Mnangagwa and his government, but also the Zanu PF struggle narrative and the Heroes Acre, and what it had come to represent.